အေသင် ****ဒီတိုက်ပွဲဟာ ငါတို့ရဲ့ အဆုံးသတ်အောင်ပွဲ****: October 2010
ကြံ့ဖွတ် အာဏာ ပိုင်များ တပ်မ (၇၇) ကိုစတင်တိုက်ခိုက်
ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့ မှ သူရဲကောင်း မစုစုနွေအား ရက်စက်စွာတိုတ်ခိုက်နေပုံ (၂၀၀၇ )
တပ်မ (၇၇) လက်အောက်ခံ ပဲခူးတိုင်းအခြေစိုက် ခမရ (၇) တပ်ရင်းမှတပ်ဖွဲဝင် ရဲဘော်များနှင့်
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်များ နှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ဖြစ်ပွား ပုံမှာ ၂၀၁၀ စစ်အုပ်စု သက်ဆိုးရှည်စေ ရေးကို
အာပေးထောက်ခံရေး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်ရွေနှင့် စက်မှု ၀န်ကြီး (၁)အောင်သောင်း ဦးဆောင်သော်
ပါတီအားမဲပေးထောက်ခံ၇န် စည်းရုံးရေးဆင်နေသော် ကြံ့ဖွတ်အင်အား (၃၀) မှ တပ်ရင်းထဲဝင်ပြီးမဲဆွယ်ရာ
ကြိုးစားဖိုလုပ်ရာက ဂိတ်စောင့် တပ်သားနှင့်မှ လက်မခံပဲ အချင်းဖြစ်ပွားပြီး ။ကြံ့ဖွတ်ကိုယ်စားလှယ် တဦး မှ
တာဝန်ကျ ရဲဘော်တဦး စတင်ပြီးလက်သီးနဲ့ထိုးရာက ။ ဂိတ်အနီး တာဝန်ကျ အလုပ်လုပ်နေသော် အခြား
ရဲဘော်များကလဲ အထိုးခံရ သော်ရဲဘော်နှင့် အတူပြန်လှန်ကြံ့ဖွတ်အဖွဲအား ထိုးကြိတ်ခဲ့သည်။ ကျေနပ်တဲ့
ခမရ(၇)အရာရှိ အရာခံအကြပ်တပ်သားများ က ကြံ့ဖွတ် ရုံး ကို ၀ိုင်းကိုဖို့ ကြိုးစားရာ လူစုနေချိန် တပ်မမှူး
ဗိုလ်မှူကြီး တင်ထွန်းကို.ယ်တိုင် မကျေနပ်တဲ့ အကြောင်း ။တပ်သားတဦးမှ ရှင်းပြပြီး တပ်သားတွေခံစားနေရာ
ရင်ဖွင့်ခံတယ် ရဲဘော်များမှ လက်မှာ ပဲခူးပြည်သူတွေ ရွှန်ရှာ။မုန်းတီးနေ တဲ့အဖြစ်ကို ခံနေရတယ် ဒါ ကို
ပြည်သူလူထုမထောက်ခံတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၀။ ကြံ့ဖွတ်ကိုမဲပေး လက်ခံရမယ်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး ။။။
ကျွန်တော်တို က လက်ရှိမှာစားဝတ်နေရေး အကြတ်အတဲ အလွန်အင်မန်တန်ခက်ခဲနေပါတယ်။
Posted by အေသင် at 1:27 AM0comments
Labels: စစ်ရေး သတင်းရေး၁
သတင်း RSS Feed
Posted by အေသင် at 1:17 AM0comments
Labels: နိူင်ငံ တကာ မှာဖိအား နအဖ အကြပ်အတဲ သတင်း
ABတပ်ဖွဲ့ ဝင် ရဲဘော်တူးတူး ။ကိုဆလိုင် ။ မိမိ
၂၀၀၉ အမှတ်တရ ပါဝင်သူအမည်များ
ရဲဘော် အိုကီးAB တပ်မှုး ။ AB စစ်ကော်မရှင် ကိုဆလိုင်း ။ ရဲဘော်တူးတူး AB တပ်ဖွဲဝင်ဟောင်း ဖခင်မှာ ဗမာ့ တပ်မတော် မွန်ပြည်နယ် ခလရမှ ဒုတပ်ရင်းမှုး။ မိမိ AB ရဲဘော် ဖခင် မှာ တပ်မတော်(လေ )မင်္ဂလာဒုံ
အမေရိကန်နိုင်ငံ နောက်ဖက်ခြမ် အော်ရီကွန်ပြည်နယ် ပေါ့်လန်မြို တော်လှန်ရေးနယ်မြေမှရောက်ရှိလာသော် ကျောင်းသားတပ်မတော်မှ ခေါင်းဆောင် နှင့် အော်ရီကွန်ပြည်နယ် ရှိ ABSDFတိုတ်ပွဲဝင်ရဲဘော်များ နှင့်တွေဆုံပြီး။-
ABSDF မှ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီး ။ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ဦးတည်ချက်များအား ရဲဘော်များအား ချပြဆွေးနွေးပြီး ။ ပြည်တွင်းတိုတ်ပွဲ ပြည်ပ လှုပ်ရှားမှူ နှင့် နိုင်ငံတကာ ရောက်ရဲဘော်များ မျိုးချစ်ပြည်သူများ ပူပေါင်းပြီး ၂၀၁၀ ကျော်လွန်ပြီး တိုတ်ပွဲကို အရှိန်မြင့်တင်ရန် ။ အမိနိုင်ငံပြည်သူလူထု စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှ လွှတ်မြောက်ရေး ။ဒီမိုကရေးစီနှင် လူအခွင့်အရေး ရရှိရေး ။ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီး။ ကျောင်းသားတပ်မတော်သည် ။ ဗမာတပ်မတော်မှ တပ်မတော်သားများ အား ရန်သူမဟုတ်ပဲ ။ဗမာတပ်မတော်သားများနှင့် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီး ။အဓိက နေပြည်တော်ရှိ စစ်အာဏာရှင်များအား တိုတ်ခိုက်ရန် ။စီမံ ချက်ရှိထားပြီး။ ၄င်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဗမာ့တပ်မတော်သားမျာပါ ပူပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီးဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြပြီး ။ တိုတ်ပွဲဝင်ရဲဘော်များ ရဲ့ လိုအပ်ချက်အား မိမိတပ်နိုင်သည်ဘက်မှ အခြားပံပိုးမှုများနှင့်အတူ ငွေကြေး များအား နှစ်စဉ်ထောက်ပံ ပေးရန် ဆွေးနွေးပြီး။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ရဲဘော်များ အားလုံးသဘောတူညီပြီး။ နှစ်ရာထာချက်ငွေများ ပထမ အဆင်အနေဖြင့်ပံပိုး ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါဝင်သော် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အားသပိတ်မှောက်နေပြီး ။ စားဝတ်နေရေး အကြပ်အတဲ အားပြေလည်အောင်ဖြေ ရှင်းရေး တောင်ဆို နေသော် တပ်မတော်သားများနှင့်ရဲမေများမိသားစု များတပ်အတွင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ငြိမ်ချမ်း လှုပ်ရှားမှုအားထောက်ခံပြီး ၄င်းတို့ နှစ်အတူ ပူပေါင်းပြီး ။နောက်တတ်လာမည် စစ်အုပ်စုအား ထိရောက်စွာဆက်လက် တိုတ်ပွဲဝင်သွားမည်ဟု သိရှိရသည်။
Posted by အေသင် at 1:01 AM0comments
Labels: စစ်ရေး ထောက် ၁
ရဲဘော်တို့မိမိတို အနေဖြင် အောက်ပါ စီးပွားရေး သမားများအား အရေးယူသွားမည်
တော်လှန်ရေးကာလဖြစ် သည်။ စကားတွေ များများ ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး ။
ပါတီတဖြစ်လဲ ကြံ့ဖွံ့အသင်းကြီးရဲ့ အခွင့်ထူးခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစာရင်း
အောက်ကစာရင်းကတော့ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ စာရင်းပါ။ ဒါတွေကို ကြံ့ဖွံ့အသင်းကြီးအဖြစ်နဲ့ တည်ထောင်စဉ်က မတည်ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ ကဲ … ပရိသတ်ကြီးကပဲ စိစစ်ပေးကြပါဦး။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်း နာမည်နဲ့ အခွင့်ထူးခံလုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီများ
မာဃ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အောင်အောင်အုပ်စု သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
မြန်မာအင်းလေး စားသောက်ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဝရဇိန် ဓါတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
တင့်တယ် စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဆုံစည်းရာ ခရီးသွား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ( Tryst Travels Co., Ltd. )
ဝေယံနန်း ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်သော ဟိုတယ်အုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ( Holy Hotel Group Co., Ltd. )
သတင်း မိုမခ အချက်အလက်များရရှိ
Posted by အေသင် at 12:34 AM0comments
Friday, 29 October 2010 10:31	သျှမ်းသံတော်ဆင့်
Posted by အေသင် at 2:53 AM0comments
Thursday, 28 October 2010 18:24	သျှမ်းသံတော်ဆင့်
Posted by အေသင် at 2:49 AM0comments
ရွေးကောက်ပွဲ ကို ထောက်ခံသော် နအဖ စစ်တပ် အား KNU တပ်ဖွဲ့တိုတ်ခိုက်
Submitted by Karen Information Center on Wednesday, 27 October 2010
Posted by အေသင် at 2:41 AM0comments
က၇င်နီစစ်ရေးပြ အခမ်းအနား ( ညာမှု စခန်း)
၁၀.၂၆.၂၀၁၀ နေ့ ရက် ကရင်နီတပ်မတော် တပ်၇င်း(၂)မှ ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော် စစ်ဗျုဟာနှစ် သံလွင် အနောက်ဘက်ခြမ် ရှာတောမြို ကို ဆက်သွယ်ထားသော် တံတား(ပွန်ချောင်းတံတား )အား ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း ။၄င်း တံတားသည် သံလွင်မြစ် အနောက်ဘက် ခြမ်းလှုပ်ရှားတပ်နှင် အခြေ စခန်းအား အဓိက ရန်သူထောက်ပံ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်ကြောင်းတွင် ရေးပါသော် တနေရာဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား လက်မခံဘဲ ကြံ့ဖွတ်နှင့် အခြားပါတီများလဲ လာရောက်မဲထဲ့ရေး စည်ရုံး သော် အဖွဲအစည်များ ကို စစ်ရေးအရ ရေးယူ မည်ဟုထုတ်ပြန်ထားသည်။ ကရင်နီ အဖွဲသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်ပုံကို လက်မခံကြောင်းတရာဝင်ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုထားပြီဖြစ်သည်။
Posted by အေသင် at 2:16 AM0comments
Posted by အေသင် at 12:53 AM0comments
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံခေါ်ရေး ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများထောက်ခံ
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ကြမဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေနဲ့ တခြား နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကပါ အလေးထား ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ဝင် ကိုစိုးထွန်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးအကြီးဆုံး၊ အခြေခံကျကျ အလိုအပ်ဆုံး အရာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်တယ်၊ အခုလို ကျွန်တော်တို့ အရေးကြီးဆုံး တည်ဆောက်ရမဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကလေးမြို့ ကြေညာစာတမ်းကို သဘောတူ ကြေညာပြီးတော့ ထုတ်ပြန်နိုင်တာ ဒါ တကဲ့ကို ကောင်းတဲ့ လိုအပ်ချက်တခု ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအနေနဲ့ အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်။”
ပြည်တွင်းမှာ လျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့က ကိုစိုးထွန်းပြောသွား တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမြို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေညာစာတမ်းကို အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဇိုမီးအမျိုးသား ကွန်ဂရက် ထူထောင်ခြင်း ၂၂ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားမှာ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင် စတဲ့ အန်အယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဝါရင့်နိုင်ငံရေး သမားကြီးတွေ စုပေါင်း လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အေသင် at 1:24 AM0comments
Labels: ပြည်တွင်း လှုပ်ရှားမှု သတင်း
ရွေကောက်ပွဲ ကို လက်မခံတဲ့ ခလရ (၁၈) နှင့် ကြံ့ဖွတ် ထိုးကြိတ်မှုဖြစ်ပွား
ဟင်္သာတမြို့ခလရ(၁၈) တပ်တွင်းမိသားစု နှင့် စစ်သား သားသမီး ကျောင်းသားများအား ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံ ရန်နှင့် ကြံ့ဖွတ် အားမဲပေး ရန် အတင်း ဖိအားပေး စည်းရုံး ရေး လုပ် နေပြီး ၄င်းလုပ်ရပ် ကို လက်မခံ သော် စစ်သားသမီးများ ကို ရွေးကောက်ပွဲပြီး ရင် ရေးယူမည်ဟု သတိပေး ခြိမ်း ခြောက် ပြီး ခလရ(၁၈) တပ်မိသားစု စစ်သားသမီးများ နှင့် ကြံ့ဖွတ်ပါတီဝင်တွေ အ ကြားထိုးကြိတ်မှူ အထိ ပြသာနာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ။ ယခုပြသာနာအား စစ်တပ်အတွင်း ရဲဘော်များနှင်အရာရှိများပါ မကြေနပ် ပဲ အထက်တိုင်းမှုးအထိ တိုင်ကြား မည်ဟုသိရှိရပြီး တပ်ရင်းမှုး ဒုဗိုလ်မှုးကြီး အောင် ဒင်က ရဲဘော်များအား ချွေးသိပ်ပြီး ၄င်း ကိုယ်တိုင် လည်း ကြေ နပ်မှု မရှိပေး။ နေပြည်တော်မှ ကကကြီး ညွှန်ကြားချက် အရ ရွေးကောက်ပွဲကို ကြံ့ဖွတ်အား မဲပေးရန် အမိန်အား
ခလရ (၁၈) တပ်ရင်း အနီး နှင့် စစ်သား သားသမီးများတတ်သော် ကျောင်းများအား လုံခြံရေးတိုးချ ထားကြောင်း သိရှိရ။။။
Posted by အေသင် at 12:33 AM0comments
နာဂ တိုင်းရင်းသား ပွဲတော်မြင်ကွင်း ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများစွာ မှီတင်းနေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပင်လုံသဘောတူညီချက်အရ လူမျိုးတိုင်း တန်းတူ အခွင့်အရေးကို အခြေခံသော ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစနစ် တည်ဆောက်ရေးကို လိုလား တောင်းဆိုနေကြပါသည်။ (Photo: AFP)
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်မှာ ကျင်းပမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာအတွက် အဖြေမဟုတ်တဲ့အတွက် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် မပြိုကွဲရအောင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးထောင်ခိုထန်းက ပြောပါတယ်။
“ကနေ့ထက်ထိ ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး အဆင်ပြေသလား၊ ပြေလည်မှု ရှိသလား၊ ဘာမှ မပြေလည်ဘူး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံလည်း မပြေလည်ဘူး၊ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး မရသေးဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အင်မတန်မှ ဖရိုဖရဲဖြစ်တော့ ကစင့်ကလျား ပြိုကွဲသွားမဲ့ အနေအထားကို တကယ်တွေ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ကဲ ကျွန်တော်တို့ ဒီ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းမှာ မဟုတ်ဖူး။ လူမျိုးစု အသီးသီးမှာ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲတဲ့ လူတွေလည်း အကုန်လုံး ကျေနပ်အောင် တခုခုတော့ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ ပြန်လုပ်မှ ရမယ် ဆိုတဲ့ဟာကို ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေက အဲဒါ စဉ်းစားထားတယ်။”
ဒီအခမ်းအနားမှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကလေးမြို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေညာစာတမ်းမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူမျိုးတိုင်း တန်းတူ အခွင့်အရေးကို အခြေခံတဲ့ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစနစ် တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူ ကျင်းပသွားမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကျင်းပတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကနေ စစ်မှန်တဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အခန်းကဏ္ဍမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကိုတိုင်းရင်းသားနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေက တညီတညွတ်တည်း ထောက်ခံထားတယ် ဆိုတာကိုလည်း ကြေညာစာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေညာစာတမ်းကို လက်မှတ်ရေးထိုးသူတွေထဲမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်၊ မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငွေသိန်း၊ နိုင်ထွန်းသိန်း၊ ကရင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်က စောဟာရီ၊ ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ သခင်သိန်းမောင်၊ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးထောင်ခိုထန်းစတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ပါဝင်ကြပါတယ်။
ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက်ရဲ့အခမ်းအနားမှာ နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်နေကျ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး သူရဲကောင်းဆုကို ဒီနှစ်အတွက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by အေသင် at 12:28 AM0comments
By နိုင်ကွန်းအိန် တနင်္လာ, 25 အောက်တိုဘာ 2010
Posted by အေသင် at 12:26 AM0comments
ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကို RFA သတင်းထောက် ကိုမိုးကျော်က အခုလို သတင်း ပေးပို့ထားပါတယ်။
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အနောက်ဖက်ခြမ်း ၄ မိုင်အကွာမှာ ရှိတဲ့ကျေးရွာတွေက လူထုတွေဖြစ်ပြီး ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့အဝင်က စစ်တပ်ဂိတ်ဝထိ ကြွေးကြော်သံတွေ ကြွေးကြော်ပြီး ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့တာလို့ ဆန္ဒပြရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ကိုဇာနည်သွေးက အခုလိုပြောပါတယ်။
“နအဖကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်တဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှု ဆန္ဒပြပွဲပါ။ ဒေသခံ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်တဝိုက်မှာ ရှိတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေ နေတဲ့ကျေးရွာရယ်၊ မွန်လူမျိုးတွေ နေတဲ့ ကျေးရွာရယ်၊ ကရင်လူမျိုးတွေ နေတဲ့ကျေးရွာရယ်၊ ကြာအင်း ဆိပ်ကြီး အနောက်ဖက်က။ ဒီကနေ့ မနက်ကတော့ အင်အား တထောင်နဲ့ တရာကျော် ပါတယ်။ ၂၀၁၀ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲ အလိုမရှိဆိုတာကို ကြွေးကြော်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေး၊ နောက် ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေး၊ နောက် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေးဆိုပြီး ကြွေးကြော်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် အောင်ရမည်။ အဲဒါပါ။”
ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးနေရာဟာ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ ရှေ့တန်းအခြေချ စစ်ဗျူဟာရုံးရှိတဲ့နေ ရာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေဖက်ကတော့ နှောင့်ယှက်ဟန့်တားတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။
အလားတူ ဆန္ဒပြပွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တုန်းကလည်း ကြာအင်းဆိပ်ကြီးနဲ့ ချောင်းနှစ်ခွ ကားလမ်းဘေးမှာ တိုင်းရင်းသား အင်အား ၅၀ဝ ကျော်လောက်က စုရုံးဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ခုလိုလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဆန္ဒပြရာမှာပါဝင်တဲ့ ကိုဇာနည်သွေးက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ သဘော ဆန္ဒကိုလည်း မြန်မာတနိုင်ငံလုံးလည်းသိနိုင်အောင် ကျနော်တို့ တကမ္ဘာလုံးကလည်း သိနိုင်အောင် အဲဒီ တခြား တခြားသော ဒေသတွေမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေလည်း သူတို့ ရောက်ရှိတဲ့ နေရာမှာ သူတို့ရဲ့ သဘောဆန္ဒကိုလည်း အခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြသဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ ဆိုတာကို ပြသဖို့ ကျနော်တို့ ဆန္ဒပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။”
ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ် ထိစပ်နေတဲ့ ဒေသတွင်းမှာ စစ်အစိုးရဖက်က ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ကြိုတင်မဲတွေ လိုက်လံ ကောက်ယူတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် အတွင်းက ဒေသအချို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ် ကြေညာထားကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by အေသင် at 12:21 AM0comments
Labels: ပြည်တွင်းလှပ်ရှားမှု သတင်း
By မသင်းသီရိ တနင်္လာ, 25 အောက်တိုဘာ 2010
Posted by အေသင် at 12:19 AM0comments
စောဘဦးကြီး မူလေးချက်ကို ကားပါမစ်နဲ့ လဲစားလိုက်ခြင်း
DKBA တပ်ဖွဲ့ 
မောင်လှအေး နဲ့နော်ဆိုင်းရေ ….
နအဖ ကတော့ ဒီကေဘီအေ ကို အစီအစဉ်ရှိရှိနဲ့ဖျက်ဆီးနေ ပါတယ်။ ဒီလိုဖျက်ဆီးနိုင်အောင် မြိုင်ကြီးငူဘုန်းကြီးက အား တက်သရော ကူညီပေးနေပါတယ်။ ကျနော်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်လူမျိုး တဦးပါ။ ဖိုးခွားလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကျနော်ဟာ ဟိုး… မယ်နယ်ပလော မြစ်ဆုံအရေးခင်းဖြစ်ပြီးနောက် ဆရာပန်းခက်ရဲ့ အ ဆွယ်ကောင်းမှုကြောင့် ဒီကေဘီအေထဲကို ပါသူဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မြ က ခရစ်ယန်တွေ ကိုပဲ အားပေးတယ် ဗုဒ္ဒဘာသာကရင်တွေကို နှိမ်ထားတယ်။ ဒီမခံခြင်စိတ်နဲ့ဒီကေဘီ အေထဲကို ၀င်ခဲ့တယ်။
တကယ့် လက်တွေမှာတော့ ဒီကေဘီအေကလည်း ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကရင် အချင်း ချင်းကို နှိမ်လိုက်တာမှ မပြောပါနဲ့ တော့ဗျာ။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်မှာ ဘယ်သူတွေ ကောင်းစားသလဲ။ အာဏာရလာတဲ့ သူတွေပဲ ကောင်းစားတော့ အားပါး.. လက်ကုန် စိတ်ဓါတ်ကျမိတယ်ဝေး။
ခုကြည့်လေ နအဖ က ဘာလုပ်လည်း။ ဒီကေဘီအေကို ကားပါမစ်တွေချပေးနေတယ်။ လက်နက်နဲ့ ပါမစ်နဲ့လဲတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ကားပါမစ်နဲ့ လဲတယ်။ ဘောဒါဂတ် ပါမစ်နဲ့လဲတာလို့ အောက်ခြေရဲဘော်တွေက ပြောနေကြပါတယ်။
ကုန်ကုန်ပြောရရင်တော့ သူဂျီးဒေါ်ကြီးကိုပါ ကားပါမစ်နဲ့ လဲစားကြမယ့် ကောင်းတွေပဲ။
ဒီလိုဗျာ သန်းရွှေက ကား ၁၀ စင်း ပါမစ်ချပေးရင်။ နယ်မြေခံ စစ်တိုင်းမှုး၊ ဗျုးဟာမှုးတွေ က ၃ စီးဖိုးယူတယ်။ ဒီကေဘီအေကို ၇ စီးဖို။ဒီကေဘီအေက ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ၊ နယ်မြေခံ နအဖ တွေက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း စားကြတဲ့ သဘောပါ။ ကရင်လူထုကတော့ တစီးမှ မရဘူး ယောက်ဖရ။ မောင်ချစ်သူနဲ့ သူနောက်လိုက်တွေပဲ စားလိုက်ကြတာ။
နယ်စပ်တံခါးပိတ်ခ အနေနဲ့ဒီကေဘီအေကို ကားပါမစ်တွေပေးပြီး ပါးစပ်ပိက်ထားခိုင်း လိုက်တာပေါ့ကွာ ။ ဒီကေဘီအေ ငြိမ်နေတာက ကားပါမစ်လေးတွေ မျိုးမျိုးမြက်မြက်ရ နေလို့ ပါ။ ကစထမှုး၊ တိုင်းမှုး၊ ဗျူဟာမှုး၊ ဒီကေဘီအေ ခေါင်းဆောင်တွေ ပေါင်းစားကြ တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီကေဘီအေဟာ တော်လှန်ရေးပြန်လုပ်မလားလို့ မေးရင်တော့ တသိ ညားဘာ (ဘာသိမလဲ) လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ခေါင်း ဆောင်တွေဟာ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ ချီပြီး ချမ်းနေပြီလေ။
မောင်ချစ်သူဆိုရင် ကားပါမစ် အစီး ၂၀၀ ခန့်ရထားပါတယ်။ ဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင် ဒေါ် လာ ၁၀ သန်းခန့် ရ ရှိနေပါတယ်။
ဒေါ်လာ ၁၀ ခန့်ရခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ကထစမှုး၊ တိုင်းမှုးတွေလည်း အလားတူ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းအထက်စီရခဲ့ကြပါတယ်။
အလားတူပဲ ကထစမှုး၊ တိုင်းမှုးတွေက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း စားကြတဲ့အတွက် ဒေါ်လာ ၃ သန်း စီလောက်တော့ ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူတွေက အပြောင်းအလဲများဖြစ်မလားလို့ ထင်နေကြတာ။ ယောက်ဖ ၊ငါပြောမယ်။ ဒီကေဘီအေခေါင်းဆောင်တွေကို နအဖ က ငြိမ်ဆေးကျွေး လိုက်ပြီကွ၊ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ လက်နက်နဲ့ ကားပါမစ်၊ စောဘဦးကြီးမူလေး ချက်ကို ကားပါမစ်နဲ့ လဲစားလိုက်ပြီလေ။ စောဘဦးကြီးမူလေးချက်က ကားပါမစ်ဖြစ်သွား ပြီကွ။
မြန်မာစစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ ကရင်ဆိုရင် ဘယ်ကရင်မှ မကောင်းဘူး။ မယုံရ ဘူးလို့သူတို့ ပြောနေကြပါတယ်။ ငါတို့ မကြားတကြားပြောတာကွ။ မျောက်အမြီးနဲ့မျောက်ကို ပြန်ချီထားတာလို့ သူတို့ အချင်းအချင်းအရက်ဝိုင်းတွေမှာ စကားကျွံလာလေ့ရှိပါတယ်။ တို့ ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင် လင်းထင်လို့ ပဲ ဇတ်သိမ်းစေရမယ်လို့ လည်း အမူးလွန်လာရင် ကျွဲခိုးပေါ်သလိုပေါ်နေကြတယ်။
ဒီထဲမှာ ဗိုလ်နှုတ်ခန်းမွေး က တော့ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်နေဆဲ လို့ သိရပတယ်။ သူက ပေးတာယူကျွေးတာစား ၊ စောဘဦးကြီးမူ လေးချက်အတိုင်း ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ စောဘဦးကြီးမူလေးချက်ကို ကားပါမစ်နဲ့ လဲမစား ဘူးပေါ့ဗျာ။
ကရင်အကွဲအပြဲမှာ ဘယ်သူတွေကောင်းစားလဲ လို့ငါပြောမယ်။ မင်းမှတ်ထား။
၁- မြိုင်ကြီးငူဘုန်းကြီး – ဘုရားတည်ခွင့်ရ၊ ကျောင်းဆောက်ခွင့်ရ၊ သွပ်ပြားပါမစ်ရ၊ ဘိ လပ်မြေပါမစ်ရ။
၂- မောင်ချစ်သူ- တနှစ်ကို ကားအစီး ၂၀၀ ပါမစ်ရ
၃- ကစထမှုး – သက်နိုင်ဝင်း – ကား ၂၀ ပါမစ်ရ
၄- တိုင်းမှုး – ထွန်းနေလင်း – ကားပါမစ်ရ၊ ဂိတ်ကြေးတွေရ
၅- စစ်ဗျူဟာမှူး ကျော်နိုင်ဦး၊ နိုင်ဝင်း ဂိတ်ကြေးတွေရ
မြိုင်ကြီးငူ ဘုန်းကြီးက တို့ဘုန်းကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့ကွာ ဖုန်းကြီးက တလွဲတွေရှောက်လုပ်ခဲ့ တာ။ ကရင်ကိုကွဲအောင်လုပ်တာ သူလာရှင်းပေးတော့ပဲ။ ခုတော့ သူက သန်းရွှေဘုန်း ကြီးဖြစ်သွားပြီ။ သာမညတောင်ဆရာတော်ကြီးဆို မြိုင်ကြီးငူဖုန်းကြီးကို သူဆီမလာနဲ့တော့လို့ မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။ တို့ကရင်လူထုကတော့ ဟိုတုံးကလည်း ညာဦးထီး၊ (ငပိ)၊ ဒီနေ့လည်း ညာဦးထီး၊ မနက်ဖြန်ကော ညာဦးထီး ပါပဲလို့ ပြောရင်းနဲ့ပဲ ငါ့စာကို ရပ် တော့မယ်ကွာ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။ ငါ ဖိုးခွားပါ ယောက်ဖရေ။ မဲဆောက်က လောက်ခေါင်လေး တပုလင်းလောက် အဆင်ပြေရင် ပို့ လိုက်ပါဦး ယောက်ဖရေ။
Posted by အေသင် at 12:13 AM0comments
Labels: စစ်အတွင်းမှတ်တမ်း A1
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်သည် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အတွက် ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူရန် ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ကလေးမြို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေညာစာတမ်းမှ စာပိုဒ်အချို့။ (Image: RFA)
အဲဒီ ကြေညာချက်ကို ဦးဝင်းတင်၊ ဦးတင်ဦး စတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဦးအေးသာအောင်၊ ဦးပူကျင်ရှင်းထန်၊ နိုင်ငွေသိန်း၊ နိုင်ထွန်းသိန်း၊ စောဟာရီ၊ စိုင်းရွှေကြူး စတဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူ သခင်သိန်းမောင်၊ ဦညွန့်သိန်း စတဲ့ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားများ အပါအ၀င် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင် ပတ်သက်နေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် အမြောက်အမြားက လက်မှတ် ရေးထိုးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ NLD ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်ကို ဦးခင်မောင်စိုး ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
Posted by အေသင် at 12:58 AM0comments
By မအေးအေးမာ တနင်္ဂနွေ, 24 အောက်တိုဘာ 2010
Posted by အေသင် at 12:56 AM0comments
မတ်လ (၂၇) ဖက်စစ် ဂျပန်တော်လှန်ရေးနေ့ စစ်ချီတတ်နေပုံ
မန္တလေး တိုင်း လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း နှင့် ဗျုဟာလက်အောက်ခံ တပ်များ အား ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ
ဦးဆောင်သော် ကြံ့ဖွတ်ပါတီအားမဲပေးရန် နှင့် စည်းရုံး ပေးရန် တပ်မှုးတပ်သား များအပြင် တပ်မတော်သားသားသမီး ကျောင်းသား အားလုံး လူထုစည်ရုံးပေးရန် ။ နေပြည်တော်မှ မန္တလေး တိုင်း လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းအသီးသီး အား ညွန်ကြားချက် သော်လည် ။ မန္တလေး တိုင်း လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ခမရ (၃၁၅) ခမရ (၁၁၃) တို့မှ လက်မခံကြောင်းသိရှိ၇သည်။ လက်ရှိ တပ်ရင်းအသီသီး
ဆိုးဝါးစွာ စားဝတ်နေရေးကြတ်တဲနေသော် ၄င်း ပြသာနာအားပြေလည်အောင် ဖြေ ရှင်း ပေးရန် အထက်သို တင်ပြထားသော်လဲ အောက်ခြေ ရဲဘော်များ တင်ပြမှုများကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးမှု မရှိဘဲ ။ မတရာသော်ရွေကောက်ပဲအားထောက်ခံပေးရန်ဖိအားပေး နေပြည်တော်အမိန်နှင့် ညွန်ကြားချက်အား ဆန့် ကျင်နေ ကြောင်း သတိရှိရပြီး။
ကြံ့ဖွတ် နာယက ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ နှင့် စက်မှု ၀န်ကြီး အောင်သောင်း ။နောက်ထပ်အာဏာရ ကြိုးစားနေကြောင်း။
(သတင်းမှတ်ချက်) ရွေးကောက်ပွဲအားပြတ်သားစွာဆန်ကျင်နေသော် တပ်မတော် သား ရဲဘော်များအား လေးစားစွာ အလေးပြုလိုက်ပါတယ် ။
Posted by အေသင် at 5:03 AM0comments
Labels: စစ်ရေးသတင်း ထူး
Friday, 22 October 2010 17:12	သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ယခုနှစ် စက်တင်္ဘာလအတွင်း နအဖ စစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်ပန်ဖှတပ်ဖွဲ့အား သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ကျူးကျော်ရန်စ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါ သေးသည်။
Posted by အေသင် at 4:59 AM0comments
နအဖစစ်အုပ်စု ဗကပ တပ်ဖွဲ ဟောင် UWSA ဒေသမှ မူယစ်ဆေးဝါးများ ကို ပြည်ပသို့တင်ပို့
တာချီလိတ်မြို့တွင် ရာဘခေါ်စိတ်ကြွဆေး ခုနှစ်သောင်းကျော်ဖမ်းဆီးရမိ\_
အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့နယ်အတွင်း ရာဘခေါ် စိတ်ကြွဆေးပြား ခုနှစ်သောင်း ကျော် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ သည်။
တာချီလိတ်မြို့ အနောက်မြောက်ဖက်ခြမ်း ငါးကီလိုခန့်အကွာရှိ ပါချလိကျေးရွာတွင်ဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသ ခံတစ်ဦးက ယခုလိုပြောသည်။
“အားခါရွာက ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုတဲ့။ သူက ရှမ်းလူမျိုးလေ။ ရာဘဆေးပြား ခုနှစ် သောင်း နဲ့ လေးထောင်မိတယ်တဲ့။”
လွန်ခဲ့သည့် လေးရက်ခန့်က ဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းအား တာချီလိတ်ရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်း ထားသည်ဟု သိရ သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူမှာ ပိုင်ရှင်သူဌေး၏ ပစ္စည်းအားသယ်ပို့ပေးရာ၌ ပစ္စည်းတချို့ကို ယူထားသည့် အတွက် သူဌေးက မကျေနပ်၍ အာဏာပိုင်ထံ သတင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံက ဆက်ပြောသည်။
“နောက်ပိုင်းမှာ သူဌေးက သူ့ရဲ့တခြားကလူတွေနဲ့ အဲဒီမင်းကိုဆီမှာဆေးသွားဝယ်ခိုင်းတယ်လေ။ အဲ့ဒီ မှာ သူထုတ်ရောင်းလာတာက သူဌေးရဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတော့ သူဌေးက မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်း အားလုံးဝယ်မယ်လို့ချိန်းလိုက်ပြီး တဖက်လှည့်နဲ့ ရဲကိုတိုင်လိုက်တော့ အဲ့ဒီမှာ ဖမ်းမိတာ။”
ထို့အပြင် တာချီလိတ်မြို့ခံ အခြားတစ်ယောက်ကလည်း လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ ရက်ခန့်က တာချီလိတ်မြို့ပေါ် တာလော့ရပ်ကွက်ရှိ Nine star တည်းခိုခန်းတွင် တည်းခိုနေသည့် စိတ်ကြွဆေးသယ်ဆောင်သူ နှစ်ဦးထံမှ ဆေး ပြားတစ်သောင်းကျော် ဖမ်းမိခဲ့သည်ဟု ယခုလို ပြောသည်။
“သတင်းရလို့ထင်တယ်။ အဲဒီလူသုံးယောက်ကို ၀င်စစ်တော့ နှစ်ယောက်ကတော့ မိသွားတယ်။ တစ် ယောက်က ထွက်ပြေးသွားတယ်ဗျ။ မိသွားတဲ့ထဲက တစ်ယောက်ကရခိုင်ဗျ။ သူ့နာမည်က ကိုလှမောင် တဲ့။ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်တော့ ကျနော်လည်း မသိဘူး။”
ဖမ်းမိသူ၏ ပြောပြချက်အရ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်ဖက်မှသယ်ယူလာခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်အား သက်ဆိုင်ရာမှဆက်လက် စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
အလားတူ လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ကျော်ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း မိန်းဖန် ဒေသသို့ ၀င်ရာက်လာ သည့် ရာဘဆေးပြားများကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တို့က ဖမ်းဆီးရမိ ခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းပစ္စည်းများမှာ ဂျပီးကွယ် ဦးဆောင်သည့် လားဟူပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့၏ ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟု ရှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်း လက်ထောက် အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည်က ယခုလိုပြောသည်။
“(၀) အဖွဲ့နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ တရုတ်ကုန်သည်အသိုင်းအ၀ိုင်းကလာတယ်ဆိုရင် သူတို့က ကမ္ဘာလုံးကို ခြင်္သေ့ခြေထောက်နဲ့ နှစ်ဖက်နင်းထားတဲ့ တံဆိပ်ဖြစ်တယ်။ အခုမိလိုက်တဲ့ဟာက A1 တံဆိပ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ A1 တံဆိပ်က ဂျပီးကွယ်တို့အဖွဲ့ လားဟူပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပဲတဲ့။”
စစ်အစိုးရက ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဌာနေပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေး ထားသော်လည်း စံနစ်တကျဖွဲ့ထားခြင်းမရှိဟု ဒေသခံများကပြောကြောင်း ၎င်းကဆက် ပြောသည်။
“သူတို့ဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့ အခမ်းအနားတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တချို့ပြောတာ သူတို့အရင်က ပုံစံအ တိုင်းပဲ ဘိုနေမြဲ၊ ကျားနေမြဲ ပြန်နေကြတယ်တဲ့။ နာမည်ကတော့ ပြောင်းတာပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် စံနစ် တကျ ပုံစံမျိုး regular တပ်ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဖူးတဲ့။”
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဌာနေပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းသည် ယင်းအဖွဲ့များအားတရားဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် ပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု တာချီလိတ်မြို့ခံများက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည်ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု အများဆုံးနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ဒုတိယ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရုံး UNODC အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
Posted by အေသင် at 4:00 AM0comments
တပ်မ (၂၂) မှ ရဲဘော်များ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန် လမ်းစဉ် အတိုင်းရပ်တည်
ဗမာ့တပ်မတော် တပ်မ (၂၂) အမှတ်တံဆိပ်
အထူးသတင်း နေပြည်တော် မှ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ။ နည်ဗျူဟာ မှုး ဦးဆောင် ပြီး ။ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူ ကြီး သန်းရွှေ နာယက ဖြစ်သော် ကြံ့ခိုင်ဖွင့်ဖြိုးရေး အား မဲပေးရန်နှင့် ထောက်ခံပေးရန် ။လူထုအား ဖိအားပေးစည်းရုံးရန် ညွန်ကြားချက် အား တပ်မ (၂၂) လက်အောက်ခံ ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကလေး အခြေစိုက် ခမရ (၂၀၃) ခမရ(၂၀၄) တပ်ရင်းများ အမိန့် ပေးခဲ့ ။ အထက်ပါညွှန်ကြားချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၄င်းတပ်ရင်းမှ တပ်မှုးများ ဗိုလ်ကြီးများ။ တပ်မှုး ။အကြပ်တပ်သားများ ။ရဲဘော်များ ရဲမေများမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူ ကြီး သန်ရွှေဦးဆောင် သော် ကြံ့ ဖွတ် အဖွဲအား မထောက်ခံကြောင်း။ ရွေးကောက်ပွဲ အား ဆန့် ကျင်ပြီး ။ပြည်သူလူထုအား လက်နက်အားကိုးဖြင့် အတင်းအကြပ် ဖိအား ပေးခြင်းမျိုးကို ပြတ်သားစွာ ဆန်ကျင်ပြီး။ ၄င်းတပ်ရင်းမှ ဗိုလ်ကြီးနှင်တပ်သား ရဲဘော် ရဲမေ များသည် ။ပြည်သူလူထု သဘောထားတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲအား ပြတ်သားစွာဆန့် ကျင်ပြီး ။ ပြည်သူလူထု နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်နေ ရပ်တည်လိုက်ကြောင်း သတင်းရ ရှိ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ပြည်သူနှင့်ချစ်ကြည်ဖြု ခါ မှန်ကန်သော် သမိုင်းမှန် ကို ရေးလိုက်ပြီး။။
(မှတ်ချက် ) တပ်မ (၂၂) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ရဲဘော် ရဲမေ များ အား လေးစားစွာ ဖြင့် အလေးပြုလိုက်ပါ သည်။
Posted by အေသင် at 1:07 AM0comments
ခလရ (၅၅) မှ တပ်မတော်သားများ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်စဉ်း အတိုင်းချီတတ်နေပြီး
မတ်လ(၂၇) ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးနေ့စစ်ချီတတ်နေပုံ
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေ စိုက် အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခြေလျှင် တပ်ရင်း (၅၅) မှ ရဲဘော်များအားလုံး အ ခြားတပ်ရင်းများနှင့် တပ်မှူးများ ။ နေပြည်တော်၏ ကကကြီး ညွှန်ကြားချက် ဖြစ်သော်
ကြံ့ဖွတ် အား ထောက်ခံမဲပေးရေး အား ပြတ်သားစွာ ဆန့် ကျင် ကြောင်း သိရှိ ရပြီ။ ပြည်သူချစ်သော် လွတ်လပ်
ရေးဖခင် ဗိုလ်အောင်ဆန်း သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖက် ပြတ်သားစွာထောက်ခံလိုက်သည်။
တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် စာဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ကြားထဲမှ ဘ၀အတွတ် ခက်ခဲစွာရုန်ကန်နေ ရပြီး မိသားစုအရေး ဖြေရှင်း ရသော်လည်း ။ အထက် အရာရှိများ ၏ အမိန့် များ ကို ဆန့်ကျင်ပြီး မလိုလားအပ်သော် အထက်မှ အပြစ်ပေးရေးယူမူ ကို ဘယ်တပ်မတော်မှ မလိုလားပေး နောက်ဆက်တွဲ ပြသာနာများ လိုလားပေ ယခုအချိန်မှာ ပြည်သူ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက် မှနေ ပြီးပြတ်သားစွာ ရပ်တည် နေလိုက်ပြီး။။။ အထက်ပါသတင်းနှင်ပက်သက်ပြီး မိမိ မိတ်ဆွေများနှင် တိုင်းသားများဖြစ်သော် ကရင်။ချင်း ။ရှမ်။ ကယား။ ညီအကိုယ်တော်များ ပြောပြရာ ။ အားလုံးသော် လုငယ်များ မှာ ယခုလုပ်ရပ်အား အမှန်တရားဖြစ်သော်ကြောင့် အားပေးထောက်ခံ ကြောင်း ၀မ်သားကြိုဆိုကြောင်း သတင်း ရ ရှိ။။။
(မှတ်ချက်) ရဲဘော်တို့ ရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့။မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ် ပြည်သူဘက်ကရပ်တည်မှု ကို လေးစားစွာ
အလေးပြုလိုက်ပါ တယ်။ မိမြေ လွှတ်မြောက်ရေးအတွတ် သင်တို့ နှင့် အတူ လက်တွဲခါ တိုတ်ပွဲ ၀င်သွားမည်။။။
Posted by အေသင် at 11:51 PM0comments
၇န်သူမှ မိုးညှင်း နှင့် ဟိုပင်မြို့ ရှိ KIO ရုံး အား ဆီးနှင်းသိမ်ပိုက်
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်း နဲ့ဟိုပင် မှာ ရှိသော် ကေအိုင်အို ရုံးအား လျှက်တပြက် ၀င်ရောက်သိမ်ပိုက် လိုက်ပြီး
ကေအိုင်အို ဆက်ဆံရေးရုံး ဗိုလ်ကြီး ခေါင်လွန်း နှင့် ရဲဘော်နှစ်ဦး လဲ ဖမ်ဆီး ခံလိုက်ရကြောင်း ။ ဒုစစ်ဦးစီချုပ် ဂွမ်မော်က လဲ ဘီဘီစီ အသံလွင် ဌာန ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလိုက်ပြီး ။
KIA အနေဖြင့် လဲ လဂျားယံ မှ စစ် ဗျူးဟာ အရ ရေးပါသော် ရန်သူတပ်စခန်း နှစ်ခုအား ၀ိုင်းထား ပြီး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ ရှိနေသည် ဟုသတင်းရှရှိ။။။ ရန်သူမှာ ရှေမြောက်ပိုင်တိုင်၏ ညွှန်ကြားချက်ကို စောင်ဆိုင်းနေပြီး ။ KIA ဖက်မှာတော့ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု အသင်ဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်သည် ဟု သိရသည်။။။
Posted by အေသင် at 12:50 AM0comments
မြိုင်ကြီးငူဘုန်ကြီး ပြသာနာ ရွာမဟုတ်ဘူ မြ၀တီမြိုပါ ပတ်နေ
နအဖတပ်နှင့် ဒီကေဘီအေအကြား တင်းမာမှု ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်း ဖြေရှင်းမည်
Submitted by Karen Information Center on Monday, 18 October 2010
အောက်တိုဘာ ၁၈ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်စပ် မြ၀တီမြို့တွင် ဆက်လက်တင်းမာနေဆဲဖြစ်သည့် နအဖစစ်တပ်နှင့် ဒီကေဘီအေတို့ကြား ပြဿနာကို ကာ ကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး (ကစထ-၄) ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်းကိုယ်တိုင် လာရောက်ဖြေရှင်းမည်ဟု ဒီကေ ဘီအေဘက်က ပြောသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်မခံသည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ)တပ်မှူးတဦးက မြ၀တီမြို့အတွင်းရှိ ၎င်းတို့နှစ်ဖွဲ့၏ တင်းမာမှုကို ယခင် အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဖြစ်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်း လာရောက်ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုလို အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
“မနက်ဖြန်ကျရင် သက်နိုင်ဝင်း တက်လာမယ်လို့ ကျနော်တို့ သတင်းရတယ်။ တက်လာတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ တခြား ကိစ္စတွေပါသလို လက်ရှိ ဆက်လက်တင်းမာနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့နဲ့ နအဖတပ်ဖွဲ့တို့ကြားက ပြဿနာရယ်၊ နယ်ခြား စောင့်တပ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လာရောက်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်သက် ဦးဆောင်သော ဒီကေဘီအေ တပ်ရင်း (၉၀၂)နှင့် မြ၀တီမြို့ရှိ နအဖစစ်တပ်အကြားမှ တင်းမာမှုပြဿနာမှာ ယခုအချိန်ထိ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာခြင်း မရှိသေးဘဲ ဆက်လက်တင်းမာနေသည့်အ တွက် ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်းကိုယ်တိုင် လာရောက်ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသည့် ဒီကေဘီအေနှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်း၏ ယခုခရီးစဉ်သည် နယ်ခြားစောင့်တပ်ပြောင်းရန် ငြင်းဆန်နေသည့် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၅)မှူး ဗိုလ်မှူးကြီးစောလားပွယ်နှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်စောထင်မောင် ဦးစီးသည့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စ လာရောက်ဆွေးနွေးရန်ရှိသည်ဟု ဒီကေဘီအေအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် မြ၀တီမြို့ခံများက ပြောသည်။
မြ၀တီမြို့ခံတဦးက “မနက်ဖြန်ကျရင် တက်လာမယ်။ ၂၁ရက်နေ့အထိကြာမယ်လို့ကြားတယ်။ လာတဲ့ကိစ္စကတော့ နယ်စပ်မှာ ရှိတဲ့ တပ်မှူးတပ်သားတွေအခြေအနေကို လာရောက်လေ့လာတာရယ်။ နောက်ပြီး နယ်ခြားစောင့်တပ်ပြောင်းဖို့အတွက် ငြင်း ဆန်နေတဲ့ ဒီကေဘီအေ လက်ကျန်တွေ၊ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကို လာဆွေးနွေးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။”ဟု ပြော သည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ရက်ခန့်က မြ၀တီမြို့တွင်းရှိ ရဲစခန်းသို့သွားရာ လမ်းကြောကို ညဖက်တွင် လုံခြုံရေးများ ချထားသလို ဒီကေဘီ အေမှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်သက် ဦးဆောင်သည့် ဒီကေဘီအေ(၉၀၂)တပ်ရင်းသည်လည်း ယခင်အတိုင်း မြ၀တီမြို့အနှံ့ တွင် အင်အား ၃၀၀ခန့် တပ်ဖြန့်ထားဆဲဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၆ရက်နေ့ညက ကော့ကရိတ်မြို့အရှေ့ဖက် ရွှေနတ်တောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့သွားရာလမ်းရှိ သစ်သား တံတားပေါ်တွင် နအဖ စစ်ကားတစ်စီး ဆွဲမိုင်းထိမှန်ကာ ကားမှာပျက်စီးသွားပြီး စစ်သားအနည်းငယ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကော့ကရိတ်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
Posted by အေသင် at 12:38 AM0comments
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း ကြံ့ ခိုင်ဖွင့်ဖြိုးရေး အနိုင်ရ ရေးအတွတ် ကကကြီး ရဲညွှန်ကြားချက် အမိန် ပေးလာချင်းကို ။ ရဲမွန် တပ် မြို့အခြေစိုက် ခမရ (၂၁၄) တပ်မှုးတပ်သားတွေ လက်မခံကြောင်း ။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။အကျဉ်ထောင်ကျ ရောက် နေသော် နိုင်ငံရေးအကျဉ်သား မလွတ်ပေး
သော်ကြောင့် ။ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြတ်သားစွာ ဆန့် ကျင် လိုက်ပြီး ။ အခြား ရဲမွန်တပ်ရင်း (၈) မှများပြား သော် အင်အားများ မှာ နေပြည်တော် လုပ်ရပ်ကိုဆန့် ကျင် နေကြောင်းကြားသိရသည်။။
ရွေးကောက်ပွဲ ကို ဆန့် ကျင်နေသော် အတိုတ်အခံ အင်အားစုများ ဖြစ်သော် NCGUB ,NCUB,DAB,NDF,ENC,DPNS, NLD LA ,ှရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံသော် တပ်မတော်သားများ အားပေးထောက်ခံ ကြိုဆိုသင်ပေ သည်။
ပြည်သူဖက်ရပ်တည်သော် တပ်မတော်သားများကိုကြိုဆို အရေးကြီးသော်အချိန်ကြ နေပြီး။။။
တပ်မတော်မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေလို ၀ုတ်နိုး နိုးဝုတ် ။မူ တူတယ် လူမတူဘူး ။ မဲပေးမယ် ကြားနေမယ် မဲမပေးဘူး မသိဘူး နားမလယ်ဘူး ဘယ်သူ မဲပေးရမှန်မသိဘူး ။ လုပ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး ဆိုတာ တပ်မတော် လက်နက်ကိုင်မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေလို မရှိဘူး ရဲဘော်တိုင်းမှာ ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချတ် ရှိပြီးသား ။ ။။
Posted by အေသင် at 11:57 PM0comments
ငါတို့ အားလုံးရဲ့ ကျောင်းသားခေါင်ဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်
င်္ဒီနေဟာ ကျောင်းသားခေါင်ဆောင်း ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ၄၈ နှစ်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ် ။၁၉၈၈ ခုနစ်က စတင်ပြီး ကျောင်းသားထု တခုလုံး စုစည်းကား အမိမြေလွှတ်မြောက်ရေးအတွတ် အမှန်တရားဖက်က ရပ်တည် ပြီး သူရဲဘ၀ ကို သူရဲ နှသား သူရဲ သာယာပျော်ရွင်မှု နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘ၀ကို ခက်ခဲကြမ်းတမ်တဲ့ ခါသီး တဲ့ နေရက်ပေါင်းများစွာ အကျဉ်ထောင်ထဲမှာ အထီးကျန်စွာ ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ ကျွန်တော်အမြင် အရ ပြော၇မယ်ဆိုရင် မိဘပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ ကို စာနာနားလည်တယ်။ တိုင်ပြ ည်မှာ ဆင်းရဲတွင်း နက်နေတာ ။ မတရာ ရက်စက်မှူတွေ ကို ဖိနှိပ်မခံ၇ပြီး အမတန်မှ ကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကို ကို ရက်ရက်စက်စက် စစ်ကျွှန်ပြု ခံနေရတာ ကိုခေါင်းငုတ်မခံဘူး အမှန်တရာဖက်က နေတိုတ်ပွဲဝင်တောင်းဆိုနေတယ် နေခြင်းဖြစ်တယ် ။တိုင်ပြည်နဲ့လူထူအပေါ်မှာ မှန်ကန်တဲ့ စေတနာနဲ့ရိုးသားဖြုစင်တဲ့ စိတ်ရင် စေတနာ ။ ရဲရင်တဲ့ ကျွှန်တော်တို့သူရဲကောင်း ဖြစ်တယ် လို ယုံကြည်တယ်။ သူဘာေ ပြာခဲ့တဲ့စကား ၈၈ အရေးအခင်း မှာ ကျောင်းသားတွေရဲ့အခု အောင်မြင်မှုဟာ ကျောင်းသားတွေရဲ ကောင်မြင်မှု မဟုတ်ပါဘူး ။ကျွန်တော်တို အရှေ့ က အရေးအခင်းတွေ အများကြီးရှိတယ် ၆၂ ခုနှစ် ၇၃ ခုနှစ် အများကြီးရှိတယ်။ မိဘပြည်သူမပါခဲ့တော့ အောင်မြင်မှူ မရခဲ့ဘူး ။ ဒီတိုတ်ပွဲဟာ အဆုံးသတ် တိုတ်ပွဲ ဖြစ်တယ် သူယုံကြည်တယ် ။ ၁၉၈၈ မင်းကိုနိုင် ဗကသ ဥက္ကဌ တာဝန်ထန်းဆောင်စဉ် ကျွန်တော် ကျဆုံးကောင်း ကျ ဆုံးပါလိမ်မယ် ဒီတိုတ်ပွဲမှာ ဒါ ပေမဲ့ မင်းကိုနိုင်တွေမြောက်များစွာပေါ်လာလိမ်မယ်။၁၉၈၈ ဗကသ ဥက္ကဌ ဖြစ်ခဲ့စဉ်ပြောသွားခဲ့တယ် ။ ကျဉ် ထောင် လမ်မပေါ် စစ်မြေပြင် ။ မှ သက်သွေး ချွေး ပေးဆပ် စွန် လွှတ်သွားသော် ရဲများနှင်အတူ ကျွနုပ်နှင့်အတူ တိုတ်ပွဲဝင် ကျဆုံးသွား သော် ရဲဘော်များခေါ င်းဆောင်များ လေးစားဦ ညွှတ်လျှက် သင်တို ၏စွန်လွတ်မှု အတိုင်းပေးဆပ် ပေးဆပ်ပါရစေ။။ ၈၈တိုတ်ပွဲ မပြီးဆုံးသေးသော်တိုတ်ပွဲအား အဆုံးသတ်တိုတ်ပွဲဝင်ရန် အလေးအနက်တိုင်တည်ပါ၏။။။။
Posted by အေသင် at 11:31 AM0comments
Labels: လူထူခေါင်းဆောင် များ
Monday, 18 October 2010 16:59	မွေခေါဝ်
Posted by အေသင် at 11:29 AM0comments
အောက်တိုလာလ ၁၁ရက်နေ့က ပဲခူးမြို့ ကျောက်တိုင်ကန် အခြေစိုက် တပ်မ ၇၇ လက်အောက် ခံ ခမရ (၈)က ရွေကောက်ပွဲကို လက်မခံ ကြောင်းကြားသိ ရ ပြီး ရဲဘော်များအားလုံး နှင့် တပ်ရင်းမှူးအပါအ၀င် အခြားတပ်ရင်း
တပ်မ (၇၇) လက်အောက်ခံ ခမရ (၁၀၁) ခမရ (၁၀၅) ခမရ (၁၀၆) မှာ တပ်သားအားလုံး ၏ တူညီသော် သဘော်ထားများနှင့် ဗျူဟာမှုးမှ တဆင် နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်ထိ အထက်ပါ တပ်မ (၇၇) လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများ ဆန့် ကျင်ကန့် ကွပ်ကြောင်း တင်ပြချက်ကို ထုတ်ဖေါ် ထားသည် ။ အထက်ပါ တပ်မှုးတပ်သား အပေါင်း အား မိဘပြည်များ။ ရဟန်ရှင်လူများအားပေးထောက်ခံသင့် သည်။
Posted by အေသင် at 5:36 AM0comments
တပ်မတော်သားများ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံလိုက်ပြီး
အနောက် တောင်ပိုင်း ခြေလျှင်တပ်ရင်း (၁၈ ) တပ်မတော်သားများ နှုင့်မိသားစုများ ကျန်ရှိသော် တပ်မတော် သားအားလုံးနှစ်အတူ ။ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ သမီး လူထုခေါင်းဆောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစု သမီး အား ပြတ်သားစွာရပ်တည်လိုက်ပြီး။ ပြည်သူလူထု လိုလားသော်ငြိမ်ချမ်းရေး တပ်မတော်သားများပါဝင်ပူပေါင်းနေပြီး ။ ဗမာတပ်မတော် ခလရ တပ်ရင်း ၁၈ တိုင်ပြည်ငြီမ်ချမ် ရေး ပြတ်ပြတ်သားသား ထောက်ခံလိုက်တဲ့အတွတ် ။ အမတန်မှ ၀မ်သာ၇ပါတယ်
မတရား ရက်စက်ပြီး တိုင်းပြည်ကို မတရားဆက်လက်အုပ်ချုပ်ဖ့ို လုပ်ရပ် ကို ဗမာတပ်မတော်သားများ ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်နေပြီး ။ ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံတကာမှ ဒီမိုကရေးစီ အင်အားစုပြည်များဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပါ ။ အဖွဲအစည်းသံဃာတပ်ပေါင်းစု ။ NCGUB ,NCUB,DAB,NDF,ENC , NLD LA အထက်ပါ တောင်းဆိုမှုကို သတင်းမီဒီယာက နေ ပြည်သူများ တပ်မတော်သားများ။တိုင်းရင်းသားချစ်ညီအကိုယ်တွေအားလုံး ကြားသိအောင် အဖွဲစည်အသီးသီး ထောက်ခံ ချက်များကို ထုတ်ဖော်ပေးရန် ရေးကြီးသော် အချိန်ကြနေပြီး လေးစားစွာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အခက်အခဲများကြား ဒေါ်အောင်ဆန်ုးစုကြည်နှင် ပြည်သူဖက်က ရပ်တည်သော် တပ်မတော် သားများကို ကြိုဆိုကြပါ ၀ိုင်းဝန်းထောက်ခံ အားပေးကြပါ ။ ကျန်ရှိနေသော် နေပြည်တော်နှင် တိုင်းတပ်မ ရဲဘော်များ အလုံး
ငါနိုင်ငံ ငါလူမျိုး ငါနိုင်ငံ ကို ငါပြည်သူငါ လူမျို ငါခေါင်းဆောင် အနာဂါတ်တွင်တည်ငြီမ်အေးချမ်းသော် တိုင်ပြည်တည်ဆောက်ရေး ၀ိုင်ဝန်ပါဝင်ထောက်ခံပေးကြပါ ။။
Posted by အေသင် at 4:33 AM0comments
မီဒီယာ WAR ကို စတင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး ကချင်တပ် နှင့် ပြည်သူကို အထင်လွဲအောင် ကြံစည်းနေခြင်း
ုသတင်းတွေရ တယ် မတရားသတင်းတွေ ရေးပြီး မတရားသတင်းထုတ်လွင်ဖို အစီအစဉ်း တွေက နေပြည်တော်ညွှန်ကြားချက်ပဲ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ကျော်စန်း ဒင်တို့ မဟုတ်မမှန် သတင်းလွင်တယ်ဆို ပြည်သူတွေ သိနေတယ် ။ ဒီသတင်း ဟုတ်မှန်တဲ့ သတင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောရင်တောင် မယုံဘူး ။ကဲ ၂၀၀၈ မှာ မြ၀တီကို MR ကင်တာနားလာပြီး တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဆွေးနွေမယ်လုပ် တုန် မြ၀တီမြို ကို MR ကင်တားနားမလာခင် 107 ဒုံးကျည်တွေ ပစ်တယ် ခေတ် ခံရတယ်ဆို ပြီးတော ဟိုလူကို စွပ်စွဲ ဒီလူကိုစွပ်စွဲ လူဘောင်သစ် ။ NCGUB /ENC ဘယ်အဖွဲ့ မှ စစ်တိုတ်တာမရှိဘူး ။ လူဘောင်သစ်ဆိုရင် ဆို ရင်မြေ အောက် လက်နက်ကိုင်လုပ်ဖို ရာ၂၂ မြောက် မှာထုတ်ပြောတယ် ရွှေးကောက်ပွဲပြီးမှဆိုပဲ ။အားလုံး ကပြောတယ် နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံရေးနည် အရဖြေရှင်းရမယ်ပြောဆိုနေပါတယ်။ စစ်လက်နက်တွေကို သေချာကြည်လိုက်တော့ လက်နက် ရှရုားလုပ်ဆိုပဲ ။ဘယ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အဖွဲအစည်းက ၀ယ် ပြီး အသုံးပြုတာ တစ်ခါမှမ တွေမိသေးဘူး။ အခုချိန်ထိ အဲ့ဒီသတင်းတွေရှင်းပြတာရှိလား DKBA တပ်ဖွဲ့ မြ၀တီ သိမ်ထားဘယ် နှစ်ရက်ရှိပြီးလဲ ။ စစ်တိုင်းမှူးအမိန် နဲ့ ရဲက DKBA အဖွဲ ကားတွေ ဖမ်းဆီးလို ။ DKBA ဒမြ တွေ ရဲစခန်းကို ၀ိုင်းတဲ့သတင်း ပြည်သူတွေမသိရသေးဘူး။ မင်းတို မမှန်တာ မဟုတ်တာရေးနေတယ် နိုင်ငံတာကာ သိနေတယ်
ဆိုကြပါစို ။ ဒီလိုဆို ရင် ရဲချူပ် ခင် ရီ ကို မကြာခင်မှာ တာဝန်ပြောင်း ပေးရမယ် အင်းစိန်အကျဉ်ဦးစီးထာဌာနကို ပို ရမယ်မြ၀တီက ရဲစခန်း DKBA ဒမြ တွေ ၀ိုင်းတယ်ဆိုတော သတင်းရရဲ့သားနဲ့ ဒီပြသာနာနဲ့ရှင်းရှင်းနေတယ်
သတင်းလဲမထုတ်ပြန်ဘူး ဟုတ်မှန်သတင်းတွေရှိရင် ကဲ လူထုကသိနေပြီး ။ ၇ဲဘော်တွေစုကြေးငွေ တောင်းခံတယ် ။စားစရာမလုံလောက်လို အဲသတင်း ပြောသံကြားရတော ။နေပြည်တော်။ဗိုလ်ချုပ်မှူကြီးမီသားစု သန်း၅၀၀ စင်ကာပူဘဏ် ကနေ တရုတ် ဘေးဂျင်ကို သယ်သွားတယ် သားသမီးတွေရှေ့ရေးအတွတ် စီပွားရေးလုပ်ဖိုဆို။
အဲဒီသတင်း သတင်းစာထဲမှာလူထုသိအောင် ရှင်းပြသင့်တယ်။
Posted by အေသင် at 1:22 AM0comments
Labels: စစ်ရေး သတင်း
အိမ်ရှေမှာ တံခါး ကို ဖွဖွခေါက်ကာ လမိုက်ည ရဲ့ အို့ 
ကေအိုင်အို ဒုဥက္ကဋ္ဌ အိမ် ဧည့်စာရင်းဝင်စစ်
ဖနိဒါ	| ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၃၂ မိနစ်
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လအောင်အိမ်ကို ယနေ့ မနက်က ရဲက ရုတ်တရက် ဝင်စစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူရပ်ကွက် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လအောင်အိမ်ကို နံနက် ၂ နာရီခန့်က အမှတ် ၁ ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် စိုးမင်းဦး ခေါင်းဆောင်သော ၄ ဦးနှင့် ရာအိမ်မှူး ဦးရှနန်ဇော်လတ်တို့ ရောက်ရှိလာပြီး ၁ နာရီခန့်ကြာ စစ်ဆေးခဲ့သည်။
“ဧည့်စာရင်းစစ်တယ်ဆိုပြီး ဝင်လာတယ်၊ အိပ်နေတဲ့
BGF အသွင်ပြောင်းရေး လက်မခံသည့် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လအောင်အိမ်အား ရဲများဧည့်စာရင်းစစ်အမည်ဖြင့် ဝင်ရောက်စစ်ဆေး
အိမ်သား အကုန်လုံးကို နိုးပြီးတော့ စုထိုင်ခိုင်းတယ်။ အရင် ပေးထားတဲ့ စာရင်းနဲ့ တူမတူ စစ်ဆေးကြည့်တယ်။ မိသားစုအကြောင်းတွေ မေးတယ်”ဟု အိမ်နီးချင်းတဦးက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ကချင်စစ်တပ်ဒုဦးစီးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လအောင်အိမ်တွင် မိဘမဲ့ကလေး ၁ဝ ယောက်ကျော် နေထိုင်ပြီး ဆွေမျိုးဖြစ်သူ ဦးနော်အောင်က စောင့်ရှောက် ပေးနေကြောင်း သူက ပြောသည်။
အင်ဘန်လအောင်သည် စက်တင်ဘာ ၃ ရက်က နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေး လက်မခံကြောင်း လိုင်ဇာမြို့ လူထု စည်းဝေးပွဲတွင် ဟောပြောခဲ့သည်။
လက်ရှိ ကေအိုင်အိုနှင့် စစ်အစိုးရအကြား ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်နေချိန် မနေ့ကလည်း တနိုင်းမြို့ ကေအိုင်အို ဆက်ဆံရေးရုံးကို ယခုလကုန် နောက်ဆုံးထား ပြောင်းရန် မယကဥက္ကဋ္ဌက ညွှန်ကြားလိုက်သည်။
ထို့ပြင် မြစ်ကြီးနားဆက်ဆံရေးရုံးနှင့် ကေအိုင်အိုအဖွဲ့ဝင်များ နေအိမ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း ရဲက စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု ကချင်အဖွဲ့ဝင်များက ပြောသည်။
Posted by အေသင် at 1:09 AM0comments
ရန်သူထိုးစစ် ၇ှမ်မြောက်ကို စတင်ရင် UWSA မှစစ်ကူပေးမည်
စစ်မြေပြင်သတင်း ရှမ်မြောက် စစ်ရေး အခြေအနေ။ ရန်သူစစ်ရေးသတင်း
ပြီးခဲ့တဲ့ လအတွင်းက နအဖ တပ်တွေနဲ့ SSA- N အကြား ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် SSA ရဲ့လှုပ်ရှား နယ်မြေတွေ ဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ သီပေါမြို့နယ်အတွင်းက စိန်ကျော့ဒေသ၊ ဝမ်ဟိုင်းဒေသတွေကို နအဖဘက်က စစ်တပ်အင်အား ထပ်မံတိုးချဲ့ထားခဲ့ပါတယ်။
စစ်မြေပြင် သတင်းများအရ ဒေသ စစ်ဆင်ရေးနှင့် စစ်မြေပြင် ကွပ်ကဲရေး တပ်များ များ ထောက်ပို့ ယတာရားတပ်
အမြောက် နှင် သံချပ်ကာတပ်များ မြေပြင်ထိုးစစ် တိုတ်ပွဲဝင် တိုတ်ခိုက်ရေးတပ် အားလုံး ဗျူဟာအမိန်က စောင်ဆိုင်နေကြောင်း ။ တမ်မ ၇၇ နှင့် တမ်မ ၉၉ အနီကပ်တွင်ရှိနေပြီး စစ်မြေပြင် ခြေလျှင်တပ်များကို အဓိကသုံးချ မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ် လေကြောင်း ထိုးစစ်ပါ ပူပေါင်းဆင်နွဲ သွားရန် ဖြစ်ပြီး အဓိကပန်ဆန်း ဒေသ သိမ်ပိုက်ရန် ဗျူဟာမှုးများသည် အထက်မှာ စစ်တိုင်းတမ်မ မှုးများ၏ အမိန့် ကိုစောင်ဆိုင်းနေခြင်း ။ တိုင်းတပ်မ များ။နိုင်ငံတော် စီမံချက်နှင့် နိုင်ငံတော်စစ်ကောင်စီဝင်များ တနည်ပြောရရင် ကကကြီး တပ်ရိုတ် ညွှန်ကြားချက် များ စောင်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိ ရှိ ရပြီး နေပြည်တော်ညွှန်ကြားချက် မှာ လူမျိုးစုနင့် မူယစ်ဆေးဝါး ၀သပ အဖွဲ့တချိန်က ဗကပ မှ တရုတ်စစ်ရေး အကူအညီဖြင့် ၇ပ်တည်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ဒေသတွင် မူယစ်ဆေးဝါးများဖြင့် လွမ်မိုးထားပြီး ရပ်တည်နေခြင်းကိုသိရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ မကြာသောအချိန်အတွင်း တရုတ်ကွန်မြုနစ် အစိုးရ နှင် နအဖ စစ်အုပ်စုအဖွဲများ ဘေဂျင်းတွင် စစ်ဆင်း များကို အဓိကမဆွေးနွေးပဲ တရုတ်အစိုး အခက်အခဲနှင် အကြပ်အတဲရှိခါ ပူပန်နေရသော်စွမ်အင်လောင်စာ စီပွားရေး ဆက်သွယ်ရေး စစ်ရေးမဟာဗျုပာာ တရုတ်ပြည်လုံ ခြုံ ရေး ရရှိဖိုအတွတ် ဖြစ်နေသော် လိုအပ်သော် နယ်စပ်ဒေသ ထိုးစစ်များပြုလုပ်ရန် နှစ်နိုင်ငံသဘော တူညီချက်များ ရယူပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ၇ပါသည်။
တပ်မ ၇၇ တပ်မ ၉၉ တပ်မ ၈၈ တပ်မ ၅၅ ဗကပ ကို အချိန်က ရေးနှိပ်အောင်ချေမှုန်နိုင်သော် တပ်များ ဖြစ်သည် ။ ၁၉၈၅ ခုနစ် ၀န်ကျင်း ကြီးမားသောစစ်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယခု ရှမ်မြောက် SSA N တပ်မဟာ (၁) ဒေသ စစ်ပွဲများစတင်နေ ပြီး UWSA မှ စစ်ကူပေးရန်အဆင်သင်ရှိနေပြီး အင်အားနှင် စစ်လက်နက် ထောက်ပံ့ရန်အသင်ရှိနေပြီး ဖြစ်သည် နယ်ခြားစောင်တပ်ကို လက်မခံသော် အဖွဲ့များပူပေါင်းတပ်ပေါ်င်းစုဖွဲထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အဖွဲတခုအားတိုက်ခိုက်လာပါက အားလုံး ရန်သူကို ပြန်တိုတ်မည် ကတိပေးထားကြသည် ။။။။ သိုသော်လဲ ဖုန်ကြား ရှင်အဖွဲ ချေမှုန်ခံလိုက်ရသည် ဟုတ်ပါတယ် ၀သပ တပ် ခေါင်းဆောင်း ကိုးကန်တရုပ်လုမျိုးများ သည် ပန်ဆန်း အမိန်ကို စောင့်နေကြောင်း အဲ့ဒီ ၀သပ နန်တင်ချောင်းတံတား နှစ်ခုကို ဖေ့ါက်ခွဲဖျက်ဆီး သွားပြီင်္းဖြစ်သည်။ သိုသော် ပန်ဆန်ဌာနချုပ် စစ်ဦးစီချုပ် အမိန်မရလာ ရန်သူထိုးစစ်ကို ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင်ကြည့်ရသော် အဖြစ်နှစ်ကြုံရသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် နေပြည် မှ ဗိုလ်ချုပ်များသည် ဘေဂျင်သို့ကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သည် ။ ယူနန် ပြည်နယ် အစိုးရ ခွင်ပြုချက်မရသော်ကြောင့် ။ စစ်ပွဲ အလွယ်တကုကျဆုံးခဲ့ပြီး မူယစ်ဆေးဝါး ခေါင်းဆောင်ဖုန်ကျားရှင်လဲ ပန်ဆန်းသို့ ထွတ်ပြေးခိုလု့ံ့နေရသည်။ တရုတ်ပြည်အစိုးရ မှသိပေးပြီး ။ ဒေါ်လှကျော်ဇော်လဲ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည် မူယစ်ဆေးဝါး အဖွဲဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
နေပြည်တော်မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မှ ဘေဂျင်တရုတ်အစိုရ အား အကြောင်းကြားထားပြီး ။ဘေဂျင်း လိုအပ်သော် GAS ပိုက်လိုင်းအား လုံ ခြုံမှုရှိရန် အကြောင်းပြပြီး မူယစ်ဆေးဝါ အဖွဲ့ပန်ဆန်းဌာချုပ်အား ထိုးစစ်ဆင်ရန်မလွဲပါ ။မကြာမီအချိန်အတွင်းစတင်နိုင် သည်။
Posted by အေသင် at 1:02 AM0comments
သောကြာ, 25 မေ 2012 ...
ဒီ သတင်း မှန်ကန်ရင် ရှေ့ဆက်တော့ဘူးဆိုရင် ကောင်တယ်
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆိုင်းထားရန် သမ္မတ ဆုံးဖြတ်	ခင်ဦးသာ	...
စစ်ပွဲတွေရပ်ပစ်! – stop the civil war! ကျော်သူ နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၁ ကချင်ပြည်နယ်၏ ထူးခြားလှသော အလှတရားများ ပျက်စီးမှုကို က...
တပ်မတော် သား ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးဇင် NLD လူငယ်များနှင့်ပူပေါင်းပြီးလူထုအကြိုးပြုလုပ်နေပုံ
တပ်မတော် ဗိုလ်ကြီး နေမျိုးဇင် သည် NLD လူငယ် အဖွဲ့ များနှင့် သွေးအလှုပေးရေးလုပ်ငန်းများ နှင့်လူထု အကူအညီ ပေးရေးလုပ်ငန်းများ ကို တတ်ကြွစွာ ပါ...
၇ ဂျုလိုင် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိင် အမြင်
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ မရ တော့ တရုတ် နိုင်ငံလုံးဝ မကြေနပ်
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းတဲ့ အပေါ် ကုလကိုယ်စားလှယ် ကြိုဆိုချက် တရုတ် မကျေနပ် 2011-10-19 မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စား...
ငြီမ်းချမ်းရေး အတွက် တိုက်ပွဲ ရှိရမယ် နီတဲ့သွေး ရဲရင်လို့ 
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်း ရေးအလို ရှိသော် ပြည်သူတွေအတွတ် အသက်စွန်ပေးဆပ်မှူ လက်နက်ရှိသူ စစ်အာဏာရှင် လက်နက်မဲ့ သံဃာ ကျောင်းသား ပြည်သူ ပါဝင် တိုက်...